Xiddiga Masar ayaa galay liistada boqolleyda ka midka ah 17ka gool dhaliye ee ugu fiican taariikhda… – Hagaag.com
Posted on 19 Oktoobar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Naadiga Ingariiska ee Liverpool ayaa sii wada dabaaldega xiddigooda reer Masar, Mohamed Salah, kaasoo horyaalka Premier League uu ka galay liistada boqolleyda oo ka mid ah 17ka gool dhaliye ee ugu fiican taariikhda kooxda, ka dib markii uu dhaliyay goolkiisii ​​100aad ee kooxda.
Xiddiga reer Masar ayaa dhaliyay goolkiisii ​​boqolaad kadib markii uu dhaliyey goolkii labaad ee Liverpool kulankii derbiga ee Everton oo lagu ciyaaray Merseyside Sabtidii, taasi oo ku dhamaatay 2-2.
Salah ayaa noqday ciyaaryahanka seddexaad ee ugu dhaqsaha badan taariikhda Liverpool ee gaara goolkii 100aad, isagoo ka dhaliyay 159 kulan, marka lagu daro ka qeyb qaadashadiisii ​​41 baas oo goolal muhim ah noqday.
Naadiga reer England ayaa kula dabaaldegay Salah, boggiisa rasmiga ah ee Twitter, iyagoo soo dhigay muuqaal kooban oo ku saabsan dhammaan 100-kii gool ee uu u dhaliyay Liverpool tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Roma xagaagii 2017.
Liverpool ayaa tiri, iyadoo faallo ka bixineysa fiidiyowga, “Had iyo jeer wuxuu joogaa dhammaan ballamaha. Boqorka Masar ma joojiyo gooldhalinta, iyadoo aan loo eegin cidda ka soo horjeedda … Ku raaxeyso 100-ka gool ee uu Mohamed Salah u dhaliyay Reds.”
Reds ayaa sidoo kale u dabaaldegtay xiddigooda rikoodhka jabiyay iyaga oo wata qoraallo fara badan.
Dad badan ayaa ku sifeeyey inuu yahay “Boqorka Masar” – wuxuu la falgalay guusha taariikhiga ah ee uu gaadhay Saalax, iyagoo tilmaamaya quruxda himilooyinkiisa iyo muhiimaddooda, oo ay ku weheliso Naadiga Reds.